Wararkii udanbeeyay dagaalka Armeeniya iyo Azarbajaan – Idil News
Wararkii udanbeeyay dagaalka Armeeniya iyo Azarbajaan
Posted By: Jibril Qoobey October 8, 2020
Dagaalka u dhaxeeya Azerbaijan iyo Armenia,ayaa sii socday maanta oo Khamiis ah, ka hor wada-hadallo la filayo in Mareykanka, Ruushka iyo Faransiiska ay ka yeeshaan sidii xabad-joojin loo gaari lahaa.
Wasiirka Arrimaha Dibedda Azerbaijan Jeyhun Bayramov,ayaa magaalada Geneva kula kulmi doona safiirada Mareykanka, Ruushka iyo Faransiiska, halka wasiirka arrimaha dibedda Armenia Zohrab Mnatsakanyan la filayo inuu saraakiil ka socota saddexdan dal kula kulmo Moscow.
Wada-hadalladan,ayaa billow u ah dadaal xoogan oo saddexdan Quwadood ee caalamka ay ku doonayaan in lagu joojiyo dagaalka.
Mas’uuliyiinta Azerbaijan,ayaa sheegay in ugu yaraan 30 qof oo shacab lagu dilay 143 kalena lagu dhaawacay dagaalka tan iyo markii uu billowday 27-kii September.
Dhinaca kale, mas’uuliyiinta Gobolka gooni u goosadka ah ee Nagorno-Karabakh,ayaa sheegay in la duqeeyey magaalada ugu weyn maamulkooda ee Stepanakert, halkaasi oo lagu dilay 30 askari, taasi oo tirada askarta illaa hadda uga dhimataya dagaalka ka dhigeysa 350.
Armenia,ayaa sheegtay inay xilka ka qaaday madaxii hay’adda sirdoonka qaranka oo lagu eryey wareegto madaxweyne lamana sheegin wax sabab ah.